FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABRADOODLE SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Labradoodle sy sary
Alika mifangaro mifangaro / alika mifangaro Labrador
Bennett the Labradoodle amin'ny 3 1/2 taona. Nilaza ny tompony fa ny palitaony dia mitovy amin'ny Poodle kokoa noho ny Labrador.
Fampahalalana Labradoodle kely
Fampahalalana Petite Labradoodle
pom sy Shih Tzu Mix
Ny alika Labradoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Fanamarihana: misy karazana Labradoodles roa samy hafa tanteraka, ny Labradoodle aostralianina sy ny American Labradoodle. ny Labradoodle aostralianina dia alika madio, raha alika hybrid kosa ny American Labradoodle.
Misy fomba vitsivitsy samihafa amin'ny famokarana mpiompy Labradoodles Amerikanina.
F1-B = 25% Labrador Retriever ary 75% Poodle (F1 Labradoodle sy Poodle hazo fijaliana): Ity no Labradoodle namboarina niverina tany Poodle, miboridana miolakolaka mibontsina endrika tena mifanaraka amin'ny karazana palitao. F1B no mety indrindra tsy misy fandatsahan-drindrina sy tsy fiantrana alika noho ny doodles REHETRA ary ny palitao mora indrindra hikarakarana.
Mora voan'ny dysplasia amin'ny hip sy ny olana ara-pirazanana.
Roxy the Labradoodle alohan'ny nanapahana ny volony amin'ny lohataona
'Ity no Roxy ilay Labradoodle mainty rehefa avy nanety ny volony tamin'ny lohataona. Faly izy fa mihavitsy, saingy tsy maharitra ela dia miverina haingana izy io. '
Roxy ilay Labradoodle mainty rehefa avy nanety ny volony tamin'ny lohataona
Sary natolotry ny Adorabledoodles
'Murphy (ambany) sy Teddy (etsy ambony) dia alika kely F1 sokajy F1 sokola Labradoodle, manana namana tsara roa, samy mpampianatra violon! Nosamborinay tao anaty vilany voninkazo izy ireo ary nanomboka noroahinay izy ireo, saingy tsy maintsy naka sary aloha ... mahafatifaty loatra! Labradoodles dia manao biby mahatalanjona. Izahay dia efa mifanerasera izy ireo ary fampiharana azy ireo am-pahatokiana isan'andro ary afaka mahita ny toetrany tena tsara mivoatra. Woof! Proud Doodle Mommas, Ashley (renin'i Murphy) ary Liz (renin'i Teddy). '
Bosco, Labradoodle Kanadiana F1 Kanadiana 5 taona
Bell the Labradoodle puppy amin'ny 6 herinandro - 'Labradoodle volamena 50% izy ary 50% fotsy Poodle fotsy.'
famahanana fromazy trano bongony alika bevohoka
Alika kely Labradoodle sôkôla, nobeazin'i Ayers Pampered Pets
Labradoodle olon-dehibe, nobeazin'i Ayers Pampered Pets
Bennett the Labradoodle amin'ny 3 1/2 taona miaraka amin'ny palitao toa poodle
'Ity i Clyde the Labradoodle amin'ny faha-7 taonany. Ny palitaony dia somary olioly kokoa, marefo sy marefo. Tsara izy, milamina ary malefaka kokoa noho ny ankamaroan'ny Labradoodles. Mety ho taonany io. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labradoodle
Sary Labradoodle 1
Sary Labradoodle 2
Sary Labradoodle 3
Sary Labradoodle 4
Labrador Retriever mifangaro alika miteraka
pyrenees tsara sisin-tany collie mix alika kely
sarin'ny terra pitbull
mainty sy tan shar pei
lhasa apso pomeranian mix amidy
Cocker spaniels mainty sy fotsy
alika mihaza kapaoty amidy
husky siberianina afangaro pitbull